St.Basil ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကတော့ ရုရှားနိုင်ငံ ၊မော်စကိုမြို့ မှာရှိပါတယ်
By ညီညီသူ 22 December 2018
၁. St.Basil’s Cathedral
St.Basil ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကတော့ ရုရှားနိုင်ငံ ၊မော်စကိုမြို့ မှာရှိပါတယ်။ ဒီဘုရားရှိခိုးကျာင်းကြီးဟာ ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ သင်္ကေတတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုေတော့ ၁၅၅၅ ခုနှစ်ကစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၁၅၆၁ ခုနှစ်ရောက်မှ ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။
၇ နှစ်အချိန်ယူတည်ဆောက်ခဲ့ရတဲ့ ဒီကျောင်းတော်ကြီးကို ဆောက်လုပ်ခဲ့တာကတော့ ဘုရင် Ivan IV Vasilyevich ပါပဲ။ Ivan ကို ၁၅၃၀နှစ် ၊ သြဂုတ်နှစ် ၂၅ မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး ၁၅၈၄ခုနှစ် ၊ မတ် ၁၈ ရက်နေ့မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဘုရားရှိခိုးကျောင်းကတော့ Iceland နိုင်ငံ ၊ Reykjavi’k မြို့ မှာရှိပါတယ်။ ဒီဘုရားရှိခိုးကျောင်းကတော့ ပရိုစတက်စတင့်ဂိုဏ်း ကနေကွဲသွားတဲ့ မာတင်လူသာဂိုဏ်းရဲ့ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘုရားရှိခိုးကျောင်းဟာ ၂၄၄ ပေမြင့်ပြီး Iceland နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံးဘုရားရှိခိုး ကျောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားရှိခိုးကျောင်းရဲ့နာမည်ကတော့ ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးလည်းဖြစ် ၊ ကဗျာဆရာလည်းဖြစ်တဲ့ Iceland နိုင်ငံသား Hallgri’mur Pe’tursson ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ Hallgri’mskirkja လို့ နာမည်ပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ Church of Mary Magdalene
အစ္စရေးနိုင်ငံအရှေ့ ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ဒီဘုရားရှိခိုးကျောင်းကတော့ ရုရှားအော်သိုဒေါ့စ်ဂိုဏ်းရဲ့ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘုရားရှိခိုးကျောင်းကတော့ ဂျူးအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ Magdalene အတွက် ရည်ရွယ်တည်ဆောက်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအမျိုးသမီးကတော့ သခင်ယေရှုနဲ့ နောက်လိုက်တယောက်ဖြစ်ပြီး ခရစ်တော်နဲ့အတူ ခရီးတွေသွားခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုတော့ ရှေးကျတဲ့ ခရစ်ယာန်ကျမ်းရင်းတွေမှာဖော်ပြထားပြီး ခရစ်တော်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ကားစင်တင်ခံရတာကို Magdalene က မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
၄။ Cathedral of Brasi’lia
Brasi’lia ဘုရားကျောင်းတော်ကြီးကတော့ ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်မှာ တည်ဆောက်ပြီးခဲ့ပါတယ်။ ရိုမန်ကက်သလစ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဖြစ်ပြီး ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာရှိပါတယ်။ Oscar Niemeyer က ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ Church of Transfiguraton
ဒီကျောင်းတော်ကြီးကတော့ အလှူခံလို့ရသမျှနဲ့သာ ရောင့်ရဲတင်းတိမ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းကွဲတခုဖြစ်တဲ့ Franciscan ဂိုဏ်းရဲ့ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတကျောင်းပါပဲ။ ဒီကျောင်းတော်ကြီးကိုတော့ ၁၇ ရာစုလောက်က ရုရှနိုင်ငံ ၊ Kizhi ကျွန်းပေါ်မှာ တည်ဆောက်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၀ ခုနှစ်မှာတော့. UNESCO ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းထဲ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Franciscan ဂိုဏ်းကိုတော့ ၁၂၀၉ ခုနှစ်မှာ Saint Francis က တည်ထောင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Ref : cntraveler
Topics: ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, အလှဆုံး၊ ခရစ်ယာန်